Matanho emutauro wechiGerman
Izvo zvinokwanisika kupedzisa ese matanho mune rimwe gore mune yeGerman fundo. Mangani mazinga muchiGerman uye kuti zvinotora nguva yakareba sei kubva padanho rimwe kuenda kune rinotevera ndeimwe yemisoro yekuziva kune avo vanoda kudzidza chiGerman. Iwe unogona kuwana ruzivo nezve idzi misoro pamwe neyedu chinyorwa chakanzi Mazinga eMitauro muchiGerman.
Zvinotora nguva yakareba sei kudzidza chiGerman?
Ivo avo vanoda kudzidza chiGerman vanopedzisa matanho manomwe kubva paA0 kusvika kuC2. Aya matanho akatsanangurwa zvinoenderana nematanho eEuropean Union. Kuti uone chiyero chako nenzira kwayo uye kutanga chidzidzo mukirasi chaiyo, bvunzo yekuisa inoitwa pakutanga. Vatangi vekutanga vanotorwa vakananga padanho reA7. Tichaedza kuratidza ese mapoka ezinga uye fungidziro yenguva dzekudzidzira pazasi, sezvo zvichisiyana mukureba kwazvinogona kupedzwa zvinoenderana nematanho.
A0 Yekutanga Chikamu: Iyi nhanho ndiyo yekutanga yekupinda nhanho umo gadziriro yekudzidza mutauro wechiGerman zvakajairika, arufabheti, mitemo yekuperetera, uye mamwe maitiro chaiwo akasimbiswa. Mune makosi mazhinji, kudzidziswa kunotanga zvakananga padanho reA1, asi pane zvimwe zvinhu zvaunofanira kuziva kuti usvike kuA1.
A1 Yekutanga Chikamu: Iyi nhanho standard kosi yeboka inopedzwa mune angangoita masvondo masere nemaawa makumi maviri ekudzidziswa pavhiki. Muboka re intensivkurs, zvidzidzo makumi matatu pavhiki zvinopedzwa mumasvondo makumi matanhatu.
A2 Elementary ChiGerman Chikamu: Muboka iri rezvikamu, iro bhendi rekosi rinozadziswa panopera mavhiki angangoita masere nemaawa makumi maviri ekudzidziswa pavhiki, uye iro boka reIntensiv kosi rinopedzwa mumavhiki angangoita matanhatu nezvidzidzo makumi matatu pavhiki.
B1 Pakati Pakati peGerman Chikamu: Mune ino chikamu cheboka, maitiro acho anoshanda nenzira imwechete seayo A1 uye A2 mazinga.
B2 Kumusoro-Pakati Pakati peGerman Chikamu: Mune ino chikamu cheboka, iro rakajairwa kosi boka rinopedzwa pakupera angangoita gumi mavhiki nemaawa makumi maviri ekudzidziswa pavhiki, uye iyo Intensiv kosi yeboka inopedzwa mune angangoita mavhiki matanhatu aine makirasi makumi matatu pavhiki.
C1 Yepamberi Chikamu cheGerman: Nepo yakajairwa kosi yeboka yekupedzisa nguva ingasiyana zvakasiyana kune vadzidzi vari muboka iri, iyo Intensiv kosi yeboka yekudzidziswa inopedzwa munguva yevhiki nhanhatu.
C2 ChiGerman Unyanzvi Chikamu: Ndiro rekupedzisira boka remitauro yechiGerman. Iyo nguva yekudzidziswa muboka iri inosiyana zvinoenderana nemabatiro ega emunhu.
Kwete: Isu tinogara tichiedza kukupa ruzivo rwezvino. Ichi chinyorwa chauri kuverenga chakatanga kunyorwa dzinenge mwedzi gumi yapfuura, muna Kukadzi 10, 14, uye chinyorwa ichi chakapedzisirwa kuvandudzwa muna Kubvumbi 2021, 20.
Zvimiro zveGerman Zvimisikidzo
German Numeri, German Nhamba 1-100
Mitsara uye Mhando dzeMitongo muchiGerman (Satztypen)
Mögen chiito conjugation
Haben Verb Kubatana
Nyika dzeGerman Asia
Zvipikiso muchiGerman Chirevo uye maGerman Kukwanirisa
Muenzaniso weGerman A2 Letter